श्वेता तिवारीले तेस्रो विवाह गर्दैछिन् ? खुसी हुँदै कसको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् – Dailny NpNews
श्वेता तिवारीले तेस्रो विवाह गर्दैछिन् ? खुसी हुँदै कसको तस्बिर सार्वजनिक गरिन्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २२, २०७८ समय: १९:४६:५७
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री श्वेता तिवारीले जे गरे पनि ट्रोलरहरूले उनलाई शान्तसंग बस्न दिदैनन्। श्वेता तिवारीले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको बारेमा भन्दा पनि उनको ब्यक्तिगत जिवनका कारण बारम्बार चर्चामा आउँछिन् ।छोरा रेयान्सको बारेमा उनका पति अभिनव कोहलीसँग विवाद छ। दुबै लामो समयदेखि छुट्टिएर बसेका थिए तर अहिले श्वेता उनको एक डान्स भिडियोको कारण ट्रोल भइरहेकी छन् ।
श्वेता तिवारी अहिले केप टाउनमा छिन्, जहाँ उनी ुखतरों के खिलाडी ११ु का लागि काम गरिरहेकी छन् । भर्खर, उनले इन्स्टाग्राममा सह प्रतिस्पर्धी विशाल आदित्य सिंहसँग ुहेप्पी डान्सु को भिडियो साझा गरिन् । जसको कारण उनी नराम्रा ट्रोल भइरहेकी छन्। केही प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूमा अनुचित टिप्पणी गरेका छन् ।
वास्तवमा श्वेता तिवारीले यो नृत्य भिडियो साझेदारी गर्दै यसको कारण के हो अनुमान लगाउनुस् भनेर सोधेकी छन् । क्याप्शनमा श्वेताले लेखिन्, ‘हो, हो यो हाम्रो खुशीको नाच हो। प्रश्न यो छ कि हामी किन खुशी छौं ? कसैले अनुमान गर्न सक्छ ? यसको जवाफमा केही प्रयोगकर्ताहरूले भने कि उनी ‘खतरों के खिलाडी ११’ फाइनलमा पुगेकी हुन सक्छिन् र नाच्दै छिन्, तर केहि प्रयोगकर्ताहरूले उनको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा टिप्पणी गरे । एक जनाले भने, ‘हो, तेस्रो बिहे हुनेवाला छ।’ अर्को प्रयोगकर्ताले लेख्यो, ‘हो, र मुर्गा समातेको हुन सक्छु।
श्वेता तिवारीले ‘खतरों खिलाडी ११’ मा भाग लिएपछि केप टाउन गए पछि दोस्रो पति अभिनव कोहलीले धेरै विवाद गरे। अभिनवले दावी गरेका थिए कि श्वेताले आफ्नो छोरा रेयन्शलाई होटेलमा छोडेर शोमा भाग लिन गएकी थिइनन् र उनलाई छोरालाई भेट्नसमेत दिएका थिएनन्।a